AIDS ကုသဖို့ဆေးနည်းအသစ်ထွက်ပေါ်လာပြီ ရှယ် ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပါ။ – Aung Par Say
November 18, 2019 November 18, 2019 Aung Zaw Linn
ပြည်တွင်းမှာ AIDS လူနာ (ဆေးစစ်၍ သိရသူ) တသိန်းနှစ်သောင်းကျော် ရှိတဲ့အနက် ART (ဝေဒနာရှင် များအတွတ် ကမ္ဘာ့ ကျန်းမားရေးဌာနမှ အထူးထုတ်ထားသည့် ဆေး)မပေးနိုင်သူ နှစ်သောင်းကျော်ရှိနေတော့စိတ်ကျရောဂါဖြစ်ပြီး ဒီဆေးရတဲ့အထိစောင့်နေစရာမလိုပါဘူး။
ဒီရောဂါပိုးရှိနေတယ်လို့ သိရတဲ့သူတော်တော်များဟာ စိတ်ထိခိုက်ခြင်း-စိတ်ဓါတ်ကျခြင်းကြောင့်ရောဂါတွေတိုးလာကြတာများတယ်၊ တချို့ ဝေဒနာရှင်တွေဟာ ရှက်စိတ်နဲ့တချို့ ကလည်း ဆေးရုံ မှာဆေးမစစ်ရဲ့ ကြဘူး ဟိုရောဂါလို ဒီရောဂါလိုလိုနဲ့ အသေခံသွားကြတယ်။
ဒီလိုဘဲဆေးရုံက ဆေးကုသရင် စရိတ်တွေ အကုန်မခံနိုင်တဲ AIDS ဝေဒနာရှင်တဦးက ရောဂါ တနေ့ တခြားဆိုးလာလို့သူမိသားစု တွေပြောရင်လဲ ၀ိုင်းပါယ်ကြမှာစိုးပြီး လူရှင်းတဲ့ ခြံတခုမှာ သေဘို့ ဆုံးဖြတ်ပြီး တဦးတည်း တဲထိုးနေရင်း လဲနေရင်း ရောဂါကလဲဖေါက်နေချိန်မှာ အနာတွေပေါက်နေ တဲ့ ခွေးပိန်ညောင် တကောင်ဟာ သူ့ အနားက ရှားဇောင်းပင်ကို လာကိုက်ပြီး ထွတ်လာတဲ့ အနှစ်တွေကို ရှာနဲ့လျှက်နေ တာတွေ့ ရတယ်…။ပြီးတော်ရှားဇောင်ပင်နားမှာဘဲ အိပ်နေတယ်၊သူလဲအားနည်းပြီး အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပြီး နောက်တနေ့ မှာ ခွေး ပိန်က လန်းလန်းဆန်းဖြစ်နေတာတွေ့ ရတယ် ပြည်တွေနဲ့ စိုနေတဲ့အနာတွေလည်းခြောက် သွားတယ်။အဲဒီဝေဒနာရှင် ဟာ ခွေးပိန်ရဲ့ ဆေးကုနည်းကိုအတုခိုးပြီး ရှားဇောင်းလက်ပတ်ပင်တွေ ကို နေ့ စဉ်မှီဝဲရာက ယနေ့ တိုင်းကျန်းကျန်းမာမာနဲ့အသက်ရှင်နေပါတယ်။
အောက်မှာဖေါ်ပြထားတာကတော့ ဒေါက်တာဖြိုးသီဟဇော်ရဲ့တိုင်းရင်းဆေးနဲ့ ကုတဲ့နည်း
၁..။ ကျွန်တော်တို့ သိတဲ့ Aloevia ( ရှားစောင်းလတ်ပတ် ။ တစောင်းလတ်ပ် ) ပင်ဟာ ကိုယ်ခံအား တတ်စေတဲ့အကျိုးအာနီသင် အပြည့်ရှိတယ် လို့နိုင်ငံတကာ ကလက်ခံယုံကြည် ထားပါတယ်..။
ဒီ ရှားစောင်းလတ်ပတ်ထဲက အသား( ဂျယ်လီ တုံး ) ပုံလေးတွေကို ချစ်ယူပြီး သကြားနဲ့ အစိမ်းလိုက်ဖြော်ရည်လုပ်သောက် ခိုင်းထားတာတွေ့ ရပါတယ်….။ ဒီလို သောက်သုံး ချင်းအားဖြင့် ကိုယ်ခံအားကို မြှင့် တင်ပေးပြီး…. အသားအရည်ကိုလည်း စိုပြည်စေတာတွေ့ ရှိရပါတယ် ခင်ဗျာ…။ ဒီလို လုပ်နည်းကို မြန်ှမာမှာသာမက အနောက်နိုင်ငံကြီးများ , Korea , Africa စတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါအခုလက်ရှိသုံးနေကြတာကို တွေ့ ရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ……..။
တစောင်းလက်ပတ်ဖျော်ရည်ကို တစ်နေ့ သုံးခွက် မှန်မှန်သောက်ပေးရင် CD4 Cell တွေပြန်တက်လာတဲ့ လူနာတွေအခုမြန်မာနီင်ငံမှာလက်ရှိရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ….။နောက်တစ်ခုကတော့.
၂ ။ ကြက်သွန်နီ ပါခင်ဗျာ..။ ဒီဟာကတော့ ကျွန်တော်သိတာ မကြာသေးပါဘူး…။ မြန်မာ့ ဆေးကျမ်း ထဲက တိုင်းရင်းဆေးဆရာကြီးတွေ သုံးခဲ့တဲ့နည်းလို့ ဆိုပါတယ်……။ ဒီ ကြည်သွန်နီနဲ့ရောဂါ ပြင်းထန်ရာကနေ သက်သာသွားတဲ့လူတွေ ရှိနေတာအခု လက်ရှိမှာ တွေ့ နေရပါတယ်………။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ မသိပေမယ့် ……. AIDS ဖြစ်လို့ကိုယ်ခံနာ မှာ ယားနာပေါက်တာ တွေ . ၀မ်းသွားတာတွေ . အနာဖြစ်တာတွေ . အားလုံး သက်သာပြီးပျောက်ကင်းသွားတာ တွေ့ ရှိနေရပါတယ်။လူလောကတစ်ခုလုံးက ကုသလို့ မရဘူးဆိုတဲ့ …..ဒီရောဂါ ဆိုးကြီးကို….( ကြက်သွန်နီ ) ဥ က သက်သာအောင်လုပ်ပေးတာ ကျွန်တော်လဲအစကမယုံပါဘူး….။ နောက်မှ ရောဂါရှင်ကိုယ်တိုင် လာပြောမှ သာလက်တွေ့ ယုံခဲ့ပါတယ်…….။ ၀မ်းသာစရာပါခင်ဗျာ….။
သုံးပုံသုံးနည်းက တော့ –ကြက်သွန်နီ ဥကြီး ၃ ဥလောက်ကိုနေ့ စဉ် အခွံနွာ … ကြက်သွန်နီဘေးမှာရှိတဲ့ မိူုမဲမဲလေးတွေကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီး …..အရည်ရအောင် ထောင်းပါ ..။ ထောင်းတဲ့ ငရုပ်ဆုံ ကလည်း သီးသန့် ဖြစ်ဖို့ လိုပါ တယ်…။သန့် ရှင်းရပါမယ် …..။
ရလာတဲ့ အရည်ကို ….တစ်နေ့သုံးခွက်မှန်မှန် သောက်ပေးပါ…..။ ၁ လ အတွင်းမှာ ရောဂါသက်သာ လာတာ …. လက်တွေ့ မြင်ရမှာပါ ခင်ဗျာ…..။ သောက်သုံးနေစဉ်အတွင်း … ၃ . ၄ ရက် အတွင်းမှာ အရေပြားမွေးညှင်းလေးတွေထဲက နေ ရွ စိ ရွစီ နဲ့ ပိုးလေးတွေ ထွက်လာတယ်လို့ဆေး ပညာရှင်တွေက ဆိုထား ပါတယ်…..။ ဆက်သာသောက်ပါ..။ စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး ….။ နည်းနည်းတော့ အနံ့တော့ဆိုး မှာပေါ့ခင်ဗျာ……..။ ရောဂါသက်သာသွားရင်လဲ နေ့ တိုင်းတစ်နေ့ သုံးခွက်သာပုံမှန် သောက်သွား ပါတဲ့………။ သက်တမ်းစေ့အောင် ကျန်းမာစွာ နေနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်လို့တိုင်းရင်းဆေးဆရာများက လက်တွေ့ ဆိုထားပါတယ်
October 29, 2019 Aung Zaw Linn
ချစ်သူဖြစ်နေရင်တောင် ဒါမျိုးလာလုပ်ရင် ဥပဒေနဲ့ငြိစွန်းလို့ ရဲစခန်းမှာ အမှုဖွင့်နိုင်ပါတယ် မိန်းကလေးတိုင်း မဖြစ်မနေ သိထားသင့်ပါတယ်နော်
October 28, 2019 Aung Zaw Linn